SABABTA OO AH ORCHIDS WAXAY LEEYIHIIN XIDID QALALAN: DHAMMAAN SABABAHA AY U DHACAAN, WAXA LA SAMEEYO HADDII AY QAYBTA HAWADU KA DHINTO KOR, IYO SIDOO KALE SAWIRO IYO XEERARKA DARYEELKA GURIGA - SOOSAARKA DALAGGA
Orchids house ma qalajisaan xididadooda? Maxay tani u dhacaysaa iyo sida loola dhaqmo?
Waxay dhacdaa in qurux aan caadi ahayn iyo ubaxa jilicsan ay bilaabaan inay daalaan oo ay fajiyaan. Caleemihiisa ayaa inoo sheega waxa ku saabsan: waxay qallajinayaan, bedelaan midab.
Inta badan, tani waxay la xiriirtaa dhimashada qaybta xididka. Sababta tani waxay noqon kartaa qaar badan, laakiin inta badan dhibaatadani waxay sabab u tahay daryeel aan haboonayn ubaxa.
Maqaalka waxaad ka ogaan kartaa sababta xididdada hawada iyo nidaamka xididka orchid ee dhan qalalan, iyo waxa la sameeyo. Waxa kale oo aad daawan kartaa fiidiyaha waxtar leh mawduucan.
Nafaqada iyo wareegga nolosha dhirta
Nidaamka asaasiga ah ee orchids gudaha wuu ka duwan yahay noocyada dhirta dhaqameed.. Waxay leedahay laba nooc oo xididada: kuwa kor ku xusan waa hawo (epiphytes) iyo kuwa dhulka hoostiisa ah waa ciid (lithophytes). Epiphytes waxay baabbi'isaa oo ku kaydisaa nafaqooyinka iyo qoyaanka hawada. Waxay aad u badan yihiin. Sababtoo ah noocyada noocan ah ee xididdada, orchid ayaa jiri kara muddo dheer iyada oo aan la waraabin. Xirmooyinka litophyte waxay uubtaa ubax ka soo carrada, si firfircoon u quudiyaan jiilaalka.
Qaybta nolosha ee warshadda waxay ka kooban tahay shan waji. Dabeecadda loo yaqaan 'cyclical nature' ee nolosha ubaxa waa mid qaraabo ah, waxa saameeya xaaladaha dibedda, hababka daryeelka, meeleynta iyo iftiinka dhirta.
Dhirta. Marxaladani waxay ka bilaabmaysaa xilligan xaadirka ah soo-bax cusub. Xilligan, caleemaha iyo xididdada waxay bilaabaan inay koraan.
Nabad. Dhamaan geeddi-socodka waa la joojiyey, taas oo ka dhigaysa unugyada ubaxa aan firfircooneyn. Nidaamka xididka wuxuu joojiyaa koritaanka wuxuuna isticmaalaa biyaha ugu yaraan. Kadibna, xididdada cusub waxay horumarisaa laan soo bax oo koraan caws ubaxa.
Ubaxa. Tani waa muddada ugu firfircoon ee warshadda: Burooyinkeeda cusub ayaa si weyn loo abuuray. Ubaxa waa habka taranta orchid.
Madadaalo. Waxay raacaysaa wajiga ubaxa.
Xilli sii kordhaya firfircoon. Waxay timaaddaa nasasho kadibna waxay keentaa burbur cusub oo ka yimaada burooyinkeeda.
Digniin: Nooca caanka ah ee orchid - Falaatopsis wuxuu ku dili karaa lix bilood ama sanad.
Waa maxay khatarta nidaamka xididada la qalajiyey ee kor iyo hoosba?
Burburkii orchidku wuxuu joojiyaa biyaha nuugista, iyo qoyaan ku uruuray digsiga waxay abuureysaa shuruudaha digaagga firfircoon ee ubaxa. Dibedda, caleemaha muddo waqti ah waxay noqon doonaan kuwo khiyaano leh si loo ilaaliyo cufnaanta iyo midabka dabiiciga ah. Inta badan, geedi socodkani wuxuu horumariyaa xilliga dayrta iyo jiilaalka, marka heerkulka hawadu hoos u dhacdo iyo iftiinka qorraxdu uu noqdo mid yar.
Aad bay muhiim u tahay inaad barato inaad kala soocdo noolasha iyo jiritaanka caafimaad ee dadka buka ama kuwa dhintay. Baadhitaankan muuqaalku wuxuu ka caawiyaa wakhtiga si loo aqoonsado cudurrada orchid kala duwan, wakhtiga si loo fahmo waxa la sameeyo haddii xididdada aaladda oo dhan la qalo iyo in la badbaadiyo dhirta buka.
Maxay dhammaantood u engegeen?
Waa maxay sababta xididdada orchid u qalalan yihiin? Laga soo bilaabo waraabin joogta ah ama dhif ah, waraabiyo biyo adag ama ka badan qiyaasta qadada. Tani waxay keeni kartaa gubista qaybta xididka sababtoo ah milix xad dhaaf ah. Xididdadu waxay ka soo baxaan hordhaca fangas ama infekshannada bakteeriyada jirka ee dhirta. Waxay u dhiman karaan sababtoo ah da'da orchid.
Sidee loo qeexaa?
Waa in si taxadar leh looga saaro ubaxa dheriga, ruxin carrada laga bilaabo xididada.
Ka dibna waxaad diyaarisaa tuubo nadiif ah biyo leh heerkulka qolka. Si tartiib ah ugu raac gacmaha xididada.
Ku shub biyo nadiif ah, ku shub nadiif.
Ka tag geedka biyaha 2-3 saacadood.
Dhaqdhaqaaqa u fiirso xididada. Haddii ay noqdaan kuwo cufan oo cagaar ah, nidaamka xididka orchid ee caafimaadkiisu waa mid caafimaad qaba, xididdadu way nool yihiin. Haddii xididada aysan isbeddelin oo ay sii socdaan oo engegaan - waxay dhinteen. Waxay muujineysaa xanuunka xididdada iyo xaqiiqda ah inay qallajiyaan, noqdaan jilicsan.
Tilmaamaha daryeelka guriga ee tallaabo tallaabo ah
Sidaas, waxa la sameeyaa xididdada la qalajiyey ee orchid ah? Tallaabooyinka waxay ku xiran tahay sababta dhimashada.:
Ka saar qaybaha dhiman ama xun ee xididdada leh mindi, aalkolo leh.
Ku rid cidhifyada budada dhuxusha budada ah.
Dib-u-xajin orchid dheriga ubax leh carrada cusub.
Waraabinta ugu horreysa ee lagu sameeyo 7 maalmood, goynta waxay qaadataa waqti ay ku jiidato.
Biyo ku dhaqi biyo, sifeyn iyo difaac.
Ku dar qiyaasta peat biyaha ah: 10 g halkii litir oo biyo ah, sababta oo ah peat waa jilciye dabiiciga ah.
Biyaha ku orda biyo-qabow leh.
Xalka Root-kicinta, sida Kornevin, waxaa loo isticmaali karaa 2-dii toddobaadba mar.
Ka fogow isticmaalka bacrimin laba ilaa saddex toddobaad.
Iska yaree qiyaasta quudinta koobaad ee nuska ah. Marka xigta waa in lagu daraa nitrogen, taas oo hoos u dhigi doonta ubax oo u oggolaanaya caleemaha iyo xididdada inay horumaraan. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo kaliya Bacriminta gaarka ah loogu talagalay orchids.
Quudiyo laba jeer bishii.
Waxaan kugula talineynaa daawashada fiidiyowga ku saabsan gubashada xididada orchid leh Bacriminta:
Laga soo bilaabo la'aanta qoyaanka orchid qoyan inta badan qalalan. Waad ku hagaajin kartaa sidan soo socota:
Samee qubeyska maalinlaha ah. Si arrintan loo sameeyo, waxaad dhigtaa berkedda biyaha ee heerkulka qolka, waxaa ku jira - dheri leh ubax. Biyaha ayaa daboolaya rhizomes of orchid 2 saacadood.
Ka dibna u wareeji dheriga orchid si aad u iftiin leh oo diiran.
Ku soo celi dharka qubeyska ilaa ay bilaabaan inay bilaabaan inay koraan. Inta u dhaxaysa qubeyska ma biyahaa ubaxa.
Qoyaan hawo oo hooseeya
Ku rid digsi trellis leh dhoobo qoyan ama hadda ka buuxsama biyaha hoostiisa. Haddii kale, waxaad ku ridi kartaa weelka ku jira waxyaalahan soo socda ee orchid.
Daadi geedka ka baxa buufin leh diirimaad diirran ama biyo roob leh.
Kala caleemaha biyo jilicsan.
Caabuqa ubaxa leh cudurrada faafa ayaa sidoo kale keenaya qalajinta xididada.. Si loo xaliyo baahida:
Dhirta ka dib markii la jarjarey oo xididdada dhintay u soo jiido laba daqiiqo gudahood xal yar oo casaan ah ee manganese ah.
Ku qallaji saacad.
Si aad u beerto ubax, ma waraabiyo, dherer hufan oo leh ciid cusub.
Ku rid meel diiran oo diiran, halkaas oo qorraxdu si toos ah u dhex gasho.
Biyaha waraabinta kaliya toddobaadkii ka dib.
Ku dawee guriga caleemaha, ubaxa, iyo xididdada hawada ee cayayaanka khatarta ah ee kiimikada. Haddii ubaxa uu si xun u saameeyo infakshanka fungal ama bakteeriyada, dib-u-daaweyntu waa lagama maarmaan ka dib labo asbuuc.
Waxaa lagu daaweyn karaa daawooyinka dadweynaha: dareeraha saabuunta (qaado oo halkii litir oo biyo ah), faleebo basbaas basal ah, oo aan bakhtiin karno biyo karkaraya iyo qoynta lix saacadood.
Gacmaha oo jajaban, xididdada dufanka leh markaad ku shubtid budada dhuxusha.
Geedka ubaxa ah ee beerta cusub ka dibna ha u cabin todobaad.
Maxaa la sameeyaa si looga hortago?
Haddii orchid aan la waraabin maalmo dhowr ah, markaa ma aha lagama maarmaan in la sameeyo waqti dambe. Noocan oo kale ah ee waraabinta oo kaliya waxyeello this ubax xarrago leh.
Guddi: Isku day inaad bacrimiso dhirta inta lagu jiro dormancy, isticmaal daawooyinka kalsiyum iyo fosfooraska. Markaad sii deyneyso peduncle, biyo ku dhaq biyo nadiif ah, ha ku dar bacrimin.
Ka hortagga dib-u-qallajinta
Waa inaad si joogto ah u sameeyaa kormeer muuqaal ah ee orchid.
U fiirso xaaladaha microclimatic ee qolka: heerkulka inta lagu jiro maalinta waa + 23iable S, iyo habeenkii - + 16 + S.
Waa lagama maarmaan in la waraabiyo warshadda si habboon.
Qoyaan kaliya jilifka substrate, waa inaysan jirin biyo ku jira digsiga. Isticmaal waraabka waraabinta biyaha sifeeya.
Warshad ku samee weelal hufan si aanay u dhicin in la gooyo hawada iyo iftiinka xididada.
Waxaa muhiim ah in la doorto habka aad u sameysid waraabinta: Beeraha qaarkood waxay sameeyaan oo keliya waraabinta, kuwa kalena waxay isticmaalaan kuleylka kuleylka ah ee lagu daro soddon ilaa soddon iyo shan heerka, qaarna waxay ku ridaan barkadda biyaha.
Wax yar oo farsamo ah ayaa farageliya wareegga dabiiciga ah ee nolosha geedka. Wixii koritaanka orchid baahan tahay in la Bloom, ka dibna - si nasasho.
Mahadnaq ku saabsan maqnaanshaha daryeel la'aanta iyo qalafsanaanta ayaa bilaabi doona in ay marar badan soo baxaan oo ka sii badan.. Iyo ubaxgu wuxuu yeelan doonaa sabab dheeraad ah si uu ugu raaxaysto ubaxiisa quruxda badan.